Allgedo.com » Xoogagga Alshabaab oo weeraray Ciidamada DFMG ah ka jooga Degmada Xudur.
Home » News » Xoogagga Alshabaab oo weeraray Ciidamada DFMG ah ka jooga Degmada Xudur. Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Xudur, Somalia (AOL) – Wararka ka imaanayo magaalada Xuddur oo ah Xarunta gobalka Bakool ayaa sheegaya in Ciidamada Xarakada Alshabaab ay weerar culus ku qaadan ciidamo ka tirsan DFKM ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Xudur, halkaasoo ay labada ciidan foodda isku dareen.
Dagaal aad u culus oo socday muddo yar oo kooban, kaasoo la isla dhacay hubka noocyadiisa kala gadisan ayaa labadaas ciidan ka dhex qarxay, hasa yeeshee waxaa illaa hadda aan caddayn tirada dhaawac iyo dhimasho ee labada dhinac kala gaartay inta ay la eg tahay.
Gudoomiyaha Degmada Xuddur Maxamed Macalin ayaa isagoo saxaafadda u waramayay sheegay in Xarakada alshabaab ay weerar ka soo qaaaday meel aan sidaas oga fogayn degmada Xuddur, isla markaana ay iska caabbiyeen oo ay gaarsiiyeen qasaare aad u xoogan, haatana ay gacantooda ku jirto goobtii lagu dagaalamay.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta ah ee Alshabaab oo aan magacooda la shaacin ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ay dagaalkaan ku gacan sareeyeen, isla markaanna ay geysteen dhaawac iyo dhimasho aad u badan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata in xarakada Mujaahidiinta ah Alshabaab ay weli awood ku leedahay gobollo badan oo dalka ah , xilli ay meesha ka baxday awooddii ay ku lahaayeen Magaalada Muqdisho.
Xafiiska Warqabadka ee Xuddur.